ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း၏သမိုင်းကြောင်း၊သင်တန်းမှတ်တမ်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းကို နိုဝင်ဘာလ(၂၀)ရက် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးကာလနှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် အနာဂါတ်လူငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တန်ဖိုးများ မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာမှုနှင့်အတူ လူငယ်များ၏နိုင်ငံရေး နိုးကြားလာမှုဟာ အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုလူငယ်များကို အခြေခံပြီး သင်တန်းကျောင်းအဖွဲ့မှ လူငယ်များ နိုင်ငံရေးနှင့်ပါတ်သတ်သော အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သိရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း
ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းများနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးပါတ်သက်သောဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲ
များစွာကိုလည်း ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း အပါတ်စဉ်များနှင့်သင်ကြားသောဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအပါတ်စဉ် Introduction to International Relation
(15.12.2010 to	1. Diplomacy
24.12.2010) 2. International Organization
( 30 hours)	3. International System
သင်တန်းသား ၁၆ ဦးတက်ရောက်၍ ၁၆ ဦးလုံး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရသည်။
ဒုတိယအပါတ်စဉ် Introduction to social sciences
(26.1.2011 to Social sciences
(48 hours) 2.History
သင်တန်းသား ၂၁ ဦးတက်ရောက်၍ ၂၁ ဦးလုံး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရသည်။
(7.2.2011 to 2.Global Conflict
16.2.2011) 3.South East Asian Studies
သင်တန်းသား ၂၅ ဦးတက်ရောက်၍ ၂၃ ဦး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရသည်။
စတုတ္ထအပါတ်စဉ် Introduction to Social sciences
(19.2.2011 to 1.Social Sciences
4.3.2011) 2.Global Conflict
(90 hours) 3.South East Asia Studies
သင်တန်းသား ၁၃ ဦးတက်ရောက်၍ ၁၂ ဦး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရသည်။
(7.3.2011 to 2.Global Conflict
4.4.2011) 3.South East Asia Studies
(360 hours) 4.Basic Economics
7.Ancient Burmese History
8.Introduction to Laws & Constitutional Analysis
10.International System & International Organization
11.Globalizations & Its Consequences
12.History of Burma Since Independence
သင်တန်းသား ၃၉ ဦးတက်ရောက်၍ ၃၃ ဦး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရသည်။
(1.5.2011 မှ 2.Global Conflict
24.6.2011 ထိ ) 3.South East Asia Studies
10.Internatinal System & International Organization
သင်တန်းသား ၂၇ ဦးတက်ရောက်၍ ၂၄ ဦး သင်တန်းပြီးဆုံးသည်။
အထက်ပါ ဘာသာရပ် (၁၂) ခုကို သင်တန်း (၃) လ အထိ တိုးချဲ.ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
ဗေဒါသင်တန်းဆင်းပွဲ နှင့် အောင် လက်မှတ်ချီးမြှင့်ပွဲ ကို (၃)ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ် သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ(၄)ရက်၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်
သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ(၆)ရက် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး တတိယအကြိမ်မြောက်သင်တန်းဆင်းပွဲ
ကို ဧပြီလ(၅)ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးဝင်းတင်ထံမှ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးသ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးဦးတင်ဦး၊ဦးဟန်သာမြင့်၊ဒေါက်တာ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့်နှင့် NLD မှ CEC အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်အားပေး ခဲ့ကြပါသည်။
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းအဓွန့်ရှည်တည်တံ့စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ များကို (၂၅.၄.၂၀၁၁) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး(၄) ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၆.၆.၂၀၁၁ နေ.မှ၂၅.၆.၂၀၁၁ နေ.အထိ Hong Kong City University မှ ဒေါက်တာကျော်ရန်လှိုင်ဦးဆောင်သောနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှ ဆရာ၁၂ ဦး သည်ဘာသာရပ် ၁၂ ခုကို သင်ကြားပေးရန်သဘောတူ လက်ခံခဲ့သည်။
သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်နှင့် ဆရာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
No`	Name of Instructor	Course title
12.	Robert Taylor
Indtitute of southeast Asian Studies
Tin Han Myo Ny un
Attorney , USA
Hiroshima Peace Institude
Ploitical Economy of Development
Political Economy Of Myanmar
Constitutional Law and Legal Thinking
Theories of Political Translation
Japan ; society and Politics
Thailand ; History and Politics
ထိုအစီစဉ်ကို ၄.၆.၂၀၁၁ နေ.တွင် ဒေါက်တာကျော်ရန်လှိူင်ကပျက်သွားကြောင်းပြောကြားခဲ့သဖြင့် ၆.၆.၂၀၁၁ နေ.မှစ၍ ဘာသာရပ်ထဲမှ Cultuarl Arthropology လွဲ၍ကျန်ဘာသာရပ်များကိုBayda Instisute မှဆရာများနှင့်အခြားသောပြင်ပမှ ဆရာများအကူညီဖြင့် သင်ကြားနေရပါသည်။ လက်ရှိတွင် သင်တန်းတက်နေသူ ကျောင်းသား ၂၂ ဦး ရှိပါသည်။
Bayda Indtitude ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ပညာ့လူ.အဖွဲ.အစည်း တည်ဆောက်ရန် ။
၂။ပညာရေးဖွံ.ဖြိုး တိုးတက်မူကို တည်ဆောက်ရန်။
၃။အမှန်တရားကို သိရှိနားလည်သော နိုင်ငံသားကောင်းများပေါ်ထွက်လာစေရန်။
-ယခုလက်ရှိသင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းသားသစ်များခေါ်၍ အဌမ အပါတ်စဉ်နှင့် န၀မ အပါတ်စဉ် သင်တန်းကာလကို ၂ လသတ်မှတ်ပြီး သင်တန်းတစ်ခုလျှင် စာသင်ချိန် နာရီ (၇၀၀) ကျော်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်
-အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်လူငယ်ကွန်ယက်မှလူငယ်များကို အခြေခံ၍ ပညာရေးတိုးတက်မြင့်မားလာအောင်လုပ်
21.	Introduction to Social Sciences
Ancient Burmese History
Introduction to laws & Constitutional Analysis
International System & International Organization
Globalizations & Its Consequences
History of Burma since Independent
ဗေဒါကျောင်းအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူများမှာ Board Of Directors အဖွဲ.ဖြစ်ပြီးကျာင်းရေရည်တည်တံ့
Board Of Directors အဖွဲ.၀င်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(၆)ဦးခင်လှိုင် (ဇောတိက သင်္ကန်း)
Board Of Directors အဖွဲ.သည်ကျောင်းနှင့်ပါတ်သက်သောကိစ္စများကိုအဓိကကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖြေရှင်း
ပေးသောExecutive Bodyဖြစ်ပါသည်။ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းနှင့်ပါတ်သက်လာလျှင် Board Of Directorsအဖွဲ.၏
ကျောင်းဦးဆောင်ကော်မတီသည်ကျောင်း၏အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ.ဖြစ်ပြီးကျောင်းရေရှည်တည်တံ့စေ၇န် ၊ကြီးထွားတိုးတက်လာစေရန် ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး အကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး
(ခ) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အလှူငွေ လက်ခံထိန်းသိမ်းရေး
(ဃ) သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
၃။ ကျောင်းသားသူများ ဦးဆောင်အဖွဲ့
ဗေဒါ သင်တန်းကျောင်း ( ပထမအကြိမ် ) အစည်းဝေးမှတ်တမ်း
-အချိန် -မနက် (၁၁)နာရီမှနေ.လည် (၁၂း၄၅)အထိ
(၂)ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် အလုပ်အမူဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ.စည်းခြင်း။
(၅)ကျောင်းသားလက်ခံမည့်အခြေအနေ (ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား (သို.) နေ.ကျောင်းသား)
(၈)ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလည်ပါတ်ရန် ဘဏ္ဍာရေးမတည်ငွေများ၊ လှူဒါန်းငွေများ ရန်ပုံငွေကိစ္စ ရပ်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
အဖွဲ.သားများနှင်ပျော်ရွှင်စွာ ကော်ဖီသောက်ခြင်းနှင့် နောက်တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးအတွက်လိုအပ်သည်များကိုဆွေးနွေးခြင်း
ဗေဒါ သင်တန်းကျောင်း ( ဒုတိယအကြိမ် ) အစည်းဝေးမှတ်တမ်း
-ရက်စွဲ - ၂၉.၄.၂၀၁၁(သောကြာနေ.)
-အချိန်- မနက် (၁၁) နာရီမှ (၁) နာရီအထိ
-တက်ရောက်သူများ (၁) ဦးစိုးမြင့်
-မှတ်တမ်းတင်သူ- မမြနန္ဒာ ၊မချိုချိုအောင် ၊မအိမ့်သီရိသူ
(၂) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ စီမံချက် ၊ ရန်ပုံငွေကိစ္စ များအတွက်ဆွေးနွေးအကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်မည်။
ကျောင်းသားများ၏စားစရ်ိတ်မှာခန်.မှန်းခြေ ( ၇) သိန်းဝန်းကျင် ခန်.ရှိမည်။
(၃)ကျောင်းကိုတရားဝင်သင်တန်းကျောင်းအဖြစ် ရပ်တည်ရန် မှတ်ပုံတင် ခွင့်လျှောက်မည်။(ပထမ ၆ လအတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်)
(၄)ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
(၅) သင်တန်းကာလ -မေ၊ ဇွန် ၊ဇူလိုင် (၃) လကာလအချိန် ၊လူ၊လုပ်အားလိုအပ်မည်။
----- အဖွဲ.သားများပျော်ရွင်စွာ ကော်ဖီသောက်ခြင်း နှင့် နောက်တစ်ပါတ် အစည်းအဝေးအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း ။
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း (တတိယအကြိမ်) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
-ရက်စွဲ -၂၈.၅.၂၀၁၁ (စနေနေ.)
-အချိန် နံနက် (၁၁)နာရီမှ နေ.လည်(၂)နာရီအထိ
-တက်ရောက်သူများ- (၁) ဦးအောင်စိုးမြင့်
-မှတ်တမ်းပြုစုသူ မချိုချိုအောင်၊ မအိမ့်သီရိသူ
1. Board 0f Directors ဖွဲ.ရန်သဘောတူသည်။
2. Board 0f Directors ဖြစ်သင့်သူများမှာ ……
(က)သက်ဆိုင်ရာအင်အားစု အဖွဲ.အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၇မည်။
(ခ)Board 0f Directors မှာ(၅)ဦးထက်မနည်း(၁၀)ဦးထက်မများစေရ။
Posted by Burma Democratic Concern at 16:21